Manchester United Oo Rajaynaysa Inay Arsenal Ku Garaacdo Heshiiska Lisandro Martinez
HomeSuuqa kala iibsigaManchester United oo Rajaynaysa inay Arsenal ku garaacdo Heshiiska Lisandro Martinez
June 20, 2022 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay isku diyaarineyso inay u dhaqaaqdo Daafaca dhexe ee kooxda Ajax Lisandro Martinez , iyagoo doonaya inay Arsenal ku garaacaan saxiixa xiddiga heerka caalami ee dalka Argentina.
Red Devils ayaa si xoogan loola xiriirinayay saaxiibkiis Martinez ee Jurrien Timber , laakiin xiddiga heerka caalami ee dalka Netherlands ayaa lagu eedeeyay inuu qaatay go’aan ah inuu la sii joogo kooxdiisa Amsterdam.
Natiijo ahaan, The Mirror ayaa werrineysa in Man United ay haatan dareenkeeda u weecisay Martinez, iyadoo daafaca dhexe uu sidoo kale wacdaro ka dhigay heer kooxeed xilli ciyaareedka 2021-22.
Arsenal ayaa sidoo kale la rumeysan yahay inay xiiseyneyso xiddiga South America, iyadoo Gunners lagu soo oogay €30m (£25.7m) laga soo diiday.
Man United ayaa haatan la sheegay in ay isku dayi doonto in ay Gunners ku garaacdo saxiixa Martinez xilli tababaraha cusub ee Red Devils Erik Ten Hag uu doonayo in uu kor u qaado difaaciisa xilli ciyaareedka 2022-23.